Fifohazana tamin'ny andro pentekôsta
« Ary ny tanan'ny Apostoly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka; ary izy rehetra niray saina teo amin'ny Fialofan'i Solomona. » Asa. 5:12.
Nomanin'i Kristy izay nilaina rehetra mba hahatonga ny fiangonany ho vatany voaova, tarafin'ny hazavan'ny lanitra, ka manana ny voninahitr'i lmanoela. Fikasany ny hahatonga ny kristianina tsirairay ho voahodidin'ny rivo-piainana ara-panahy anjakan'ny fahazavana sy ny fiadanana. Tsy misy fetra ny anjara asan'ny olona izay manaisotra ny izahony ka manome sehatra ny fiasan'ny Fanahy Masina eo amin'ny fo, ary miaina fiainana voatokana tanteraka ho an'Andriamanitra.
Inona no vokatry ny firotsahan'ny Fanahy tamin'ny andro Pentekôsta? Nentina hatrany amin'ny faran'ny tany lavitra indrindra nisy mponina amin'izao tontolo izao ny vaovao mahafaly momba ny Mpamonjy nitsangana tamin'ny maty. Nitobaka tao am-pon'ireo mpianatra ny fitiavana feno sy lalina ary mahery indrindra, ka nanery azy handeha hatrany amin'ny faran'ny tany izany, hijoro ho vavolombelona hoe: "Sanatria raha mba misy hataoko rehareha afa-tsy ny hazo fijlian'i Jesosy Kristy Tompontsika" - Gal. 6:14. Raha nitory ny fahamarinan'i Kristy izy ireo, dia babon'ny herin'ny hafatra ny fo maro. Nahita olona maro niova fo, avy amin'ny vazan-tany rehetra, nirohotra nanatona azy ny fiangonana. Niova fo indray ireo nihemotra. Niray tamin'ny Kristianina ny mpanota mba hikatsaka ilay Vatosoa sarobidy.
Lasa mpitory filazantsara mahafatra-po ireo mpanohitra azy nasiaka indrindra teo aloha. Tanteraka ny faminaniana manao hoe: "ho tahaka an'i Davida" izay malemy, ary ny taranak'i Davida dia ho "tahaka ilay Anjelin'i Jehovah." Hitan'ny Kristianina tsirairay teo amin'ny rahalahiny ny endrik' Andriamanitra: ny fitiavany sy ny famindrampony. Zavatra iray ihany no nahaliana sy nanjaka. Anton-javatra iray ihany no nampientana ka nanakona ny zavatra hafa rehetra. Haneho ny fitoviana amin'ny toetra amam-panahin'i Kristy sy hiasa hampivelatra ny fanjakany no niredareda tao am-pony.
Mariho fa taorian'ny niraisan'ny mpianatra hina tanteraka, rehefa tsy nitady ny toerana ambony indrindra intsony izy ireo, vao nirotsaka taminy ny Fanahy. Niray saina izy ireo. Nariana ny fahasamihafana. Ary dia tahaka izany ihany ny fitantarana momba azy ireo taorian'ny nanomezana azy ny Fanahy Masina. RH, 30 Aprily 1908.